राष्ट्र, जनजिविका र ‘लोकतन्त्र’ : पहिलो कुन ? - Aarati Patrika
Home » विचार » राष्ट्र, जनजिविका र ‘लोकतन्त्र’ : पहिलो कुन ?
in विचार 2016-01-31	0 47 Views
कथित लोकतन्त्रको प्रश्न आम नागरीकहरुसंग सरोकार रहेको प्रश्न होईन । संपूर्ण नागरीकहरु न त सत्तामा जान्छन् न त्यसका आकांक्षि नै हुन्छन् । समाजमा एउटा अभिजात तप्काले शासन गरेको हुन्छ । राम्रो वा नराम्रो जे सुकै भए पनि शासन गर्ने वर्ग भनेको अभिजातहरुको तप्का हो । अभिजातहरुमध्ये कसैले सापेक्ष रुपमा देश र जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्दछन् र कसैले गर्दैनन् तर शासन तन्त्रको विषय समाजमा सानो संख्यामा रहेको समुहको सरोकारको प्रश्न हो । यस अर्थमा यो प्रश्न राष्ट्रियता र जनजिविकाको तुलनामा तपशिलको विषय हो । तर नेपालको इतिहासमा हामीले यसको ठिक विपरित अभ्यास देख्दै आएका छौं ।
यस्तो विपरित अभ्यासको कारण पनि प्रष्ट छ । यसको कारण हो, नेपाल जस्ता नव–औपनिवेशिक देशहरुलाई स्वाधिन र संबृद्ध बन्न नदिने साम्राज्यवनादी रणनीति । खण्डित राष्ट्रियता र दरित्र नागरीक भएको देशलाई आफूप्रति निर्भर बनाएर प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने रणनीति अनुसार नै नेपालमा राष्ट्रियता र विकास निर्माणका समस्याहरुलाई समाधान हुन नदिएर नेपाली जनतालाई सँधैभरि समाधानहिन नव–औपनिवेशिक गोलचक्करमा फसाई राख्ने योजनानुसार कथित लोकतन्त्रको प्रश्नलाई धुरी बनाएर नेपालीहरुलाई अल्मल्याउने काम विदेशी शक्तिहरुले गर्दै आएका छन् । यो संकटको निरन्तरताको प्रमुख कारण हो ।
नेपालका लागि राष्ट्रियता पहिलो, विकास निर्माणको प्रश्न दोश्रो र शासन प्रणालिको कुरा तेश्रो महत्वको प्रश्न हो । शासन प्रणालि कस्तो प्रकारको उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा अघिल्ला २ वटा विषयहरुले निर्धारण गर्दछन् । छाडा र वर्वर कुतत्वहरुलाई नियन्त्रण नगरेर राष्ट्रियता र जनजिविकाका समस्याहरु समाधान हुँदैनन् । यसर्थ, वर्तमानको जस्तो अराअकताको स्वतन्त्रतामा आधारित शासन प्रणालिको निषेध तथा अराजक विदेशी दलालहरुमाथि पूर्ण नियन्त्रणको नीतिमा आधारित शासन प्रणालि नेपालको जरुरी आवश्यकता हो । देशद्रोहिहरु माथि कठोर दमन विना नेपाल न त स्वाधिन हुन्छ, न त यसको विकास नै हुने संभावना छ ।
भरत दाहालको वेव पेजबाट
Previous: ईन्फोटेकको दोश्रो दिन ८५ हजारद्वारा अवलोकन
Next: चितवनमा श्रीयम मसलाको आधिकारिक बिक्रीकेन्द्र